lahatsary fifandraisana atao eo amin'ny Internet
lahatsary fifandraisana atao eo amin’ny Internet
Miaraka ny fampandrosoana ny Aterineto, ny mpampiasa dia lasa misy ny asa fanompoana tsy manam-paharoa ny lahatsary fifandraisana
Tambajotra sosialy YouTube renirano
Somary vaovao tambajotra sosialy YouTube renirano dia nandefa tolotra iray vaovao — ny fahafahana ho an’ireo mpampiasa mampiasa ny tolotra antso amin’ny alalan’ny tranonkala fakan-tsary an-tserasera. Mba jereo ny tsirairay, ireo mpampiasa afa-tsy mila mifandray amin’ny PC webcam (ao ny raharaha ny solosaina findainy amin’ny naorina-ao amin’ny fitaovana ity hetsika ity dia tsy ilaina). Taorian’ny fametrahana sy fanamarinana ny fitaovana, ny safidy, ny fiainana manokana (fizarana»antsoy aho») no voafidy amin’ny fomba toy izany koa ny lahatsary fifandraisana izany dia manan-danja manokana mpampiasa. Ao amin’ny ho avy, indray mandeha ny zavatra rehetra dia voaendrika, tsindrio fotsiny ny bokotra amin’ny sasany soratra ao amin’ny tantara faharoa mpampiasa, dia fifandraisana aminy no haorina.
Fampiharana ny Skype sy ny lahatsary amin’ny chat iraisam-pirenena
Vao haingana, Skype dia napetraka ho ny hany (sy ny fibodoana ny ampihimamba toerana eny an-tsena) ny mety hisian’ny lahatsary fifandraisana amin’ny alalan’ny Internet. Amin’izao fotoana izao ireo mpampiasa maro kokoa ny fametrahana ny rindrambaiko amin’ny biraonao solosaina, fitaovana finday, ary maro ny zavatra maro ny fitaovana. Skype iraisam-pirenena ny lahatsary amin’ny chat manolotra ny fahaiza-manao ny antso amin’ny fampiasana ny aterineto, fa koa vonoy ny feo mifanindran-dàlana hanoratra hafatra amin’ny lahatsoratra endrika. Tsara homarihina, noho ny fahombiazana fanamafisam-peo endrika, ny fampiharana mamela mora foana ianao mba handamina sy mihazona ny lahatsary fihaonambe, mifandray amin’ny asa fanompoana maro mpampiasa.
Ny tena azo ampiharina sy ny fomba tsotra mba hanohanana ny lahatsary fifandraisana eo amin’ny mpampiasa, dia nanorina-in fanompoana Google. Ho an’ny rehetra izay mampiasa isan-karazany ny tolotra malaza indrindra fikarohana amin’ny Aterineto, ny mety hisian’ny lahatsary ny fifampiresahana misokatra nandritra ny fotoana ela. Ao kosa ny ambony-namaritra ny asa, Google manana ny fahafahana mamela ny isan’ny mpampiasa izay ho tena mahasoa indrindra izany rehefa mikarakara ny fihaonambe, ny fifanakalozan-kevitra isan-karazany ny raharaham-barotra olana ary koa, ho toy ny safidy iray — ny fandaminana ny dingana fanofanana mpampianatra ny fampianarana, fanofanana ary ny maro hafa.
Ny tombontsoa azo avy amin’ny fampiasana lahatsary fihaonambe rindrambaiko
Rehefa heverina ho toy ny amin’izao fotoana izao ny fomba lahatsary fifaneraserana ao amin’ny Internet, dia tokony handinika ny maha-zava-dehibe ny mampiasa ny sasany ny asa.
Ny tombony dia ahitana ny manaraka izao:
Ireo mpampiasa dia afaka hiatrika lahatsary fifandraisana amin’ny tsirairay
Tsy toy ny hafa ireo fomba fifandraisana, izany dia mamela tsy ho re sy hitanao ny tsirairay, hanao izany an-tserasera;
Ho tsaratsara kokoa ny fifandraisana, afa-tsy ny fisian’ny webcam, marin-toerana, ary haingam-pandeha amin’ny Aterineto (toy ny safidy, ny fanatanjahan-tena fitaovana afaka ary amin’ny ambany ny hafainganam-pandeha, nefa dia manana ny fialan-tsasatra);
Hamaivanina ny vola lany ny fifandraisana, tsy toy tsotra finday fifandraisana, mba ho tahaka izany ny antso ho amin’ny firenen-kafa mety ho maimaim-poana tanteraka.
Ny fampiasàna ny Aterineto ho an’ny lahatsary fifandraisana dia mahasoa sy mora rehetra mety ho mpampiasa
← Ahoana no Ho Zazavavy Izay Daty Ankizivavy: Ny tari-dalana Ho an'ny vehivavy miray amin'ny Vehivavy Niaraka Auto straddle
Online Mampiaraka toerana →